#Hogaamiyaha mudaaharaadka Suudaan iyo militariga ayaa kala saxeexdey Heshis lagu Dhisaayo Dawlad rayid ah
Golaha militariga iyo hogaamiyaaha mudaaharaadayaasha waxaay saxiixeen 'bayaan dastuuri' oo wadada u xaaraya sidi logu gudbi laha xukun rayid ah.
By AFP AFP On Aug 17, 2019
Ragga ka dambeeya calan weyn ee Itoobiya ayaa sidoo kale ruxaya calanka dalka Suudaan iyaga oo u dabaaldegaya kala-guurka xukunka rayidka. [Ahmed Mustafa / AFP]
Isbaheysiga mucaaradka ugu weyn ee Suudaan iyo golaha militariga talada haya ayaa si rasmi ah u wada saxiixday heshiis awood qeybsi kama dambeys ah, taas oo wadada u xaareysa in loo gudbo dowlad ay shacabka rayidka hogaamiyaan.
Heshiiskii taariikhiga ahaa ee Sabtidii lagu kala saxiixday magaalada Khartuum ayaa yimid ka dib wadahadalo dheer oo soo socday ka dib afgembigii hogaamiyaha mudada dheer ka talinayey Dalka Cumar Al-Bashiir ka dib mudaaharaadyada waaweyn oo hareyey xukumaddiisa oo ugu dambeyntii ku qasabtey in xukunka uu ka tago.
Heshiiska ayaa waxaa qalinka ku dugay Mohamed Hamdan Dagalo, oo ah kuxigeenka Golaha Militariga Ku-meelgaarka (TMC) iyo Ahmed al-Rabie, oo matalaayay dalladda Isbahaysiga Xoriyadda iyo Isbedelka ee suudan.
Heshiiska ayaa dhidibada u aasaya milatariga iyo golaha shacabka si wadjir ah ay u xukumaan waxyar in ka badan seddex sano ilaa doorashada la qaban karo. Waxaay kale oo ay dhisi doonaan gole wasiir oo ay magacaabi doonan dadkii qeybta ololaha kamid ahaa iyo hay’ad sharci dejin.
Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qeyb galay madax ka socota xukumadda, ra’iisul wasaaraha iyo marti sharaf ka kala socota dalal dhowr ah oo uu ka mid yahay ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo Madaxweynaha Koonfurta Suudaan Salva Kiir.
Kadib todobaadyo wadahadal xasaasi ahaa oo uu socday labada dhinaca, ayaa labada dhinac waxa ay gaareen heshiis hordhac ah horaantii bishaan ka dib cadaadis caalami ah iyada oo walaac isa soo taraya laga muujinayo in xiisadda siyaasadeed ay kicin karto dagaalo sokeeye oo ka dilaaco dalkaas.
Heshiiska la gaarey 4tii Agoosto ayaa soo afjaray ku dhawaad ​​sideed bilood oo qalalaase ah oo ay dad badani oo ay dad badani ay ku dhintee kaas oo markii dambe sababey in al-Bashiir, laga saaray bishii Abriil kadib markii uu xukunka hayay 30 sano.
Heshiiska, oo ay dhex dhexaadiinayeen Midowga Afrika iyo Itoobiya, ayaa waxaa lagu soo dhoweeyay dabaca ay labada dhinac ay mujiyeen.
Bannaanbaxayaasha ayaa u dabaaldegay waxaa ay u arkeen guusha ay gareen ee “Kacdoonkoodii”, halka Hogamiya militeriga uu dhankisa shacabka uga mahad celiyey sidaa ay uga fogadeen in uu dhaco dagaal sokeeye.